Inona ny gorodona pelvika sy ny fomba fanamafisana azy | Bezzia
Inona ny gorodona pelvika sy ny fomba fanamafisana azy
Toñy Torres | 13/10/2021 23:55 | Torohevitra momba ny fahasalamana
Betsaka ny zavatra voalaza momba ny gorodona pelvika raha ny momba ny vehivavy reny, fa kely ny voalaza momba ny maha-zava-dehibe ny fanamafisana io faritra amin'ny vatana io. Ny vehivavy rehetra, tsy an-kanavaka, dia tokony hiasa amin'ny gorodon-tongony na dia tsy bevohoka aza izy ireo. SATRIA ny hozatra amin'ity faritra ity dia mihamalemy rehefa mandeha ny fotoana ary io no tena miteraka olana toy ny famoahana ny mony.
Ny gorodona pelvika dia ny hozatry ny hozatra sy hozatra hita eo amin'ny faritra ambany amin'ny kibon'ny kibo. Ireo dia manana anjara asa tena lehibe satria izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fanohanana ireo taovam-pisefoana, toy ny tatavia sy ny urethra, ny fivaviana, ny tranon-jaza ary ny refy. Mba hiasa tsara ireo taova ireo dia tsy maintsy tazonina amin'ny toerana sahaza azy izy ireo ary ho an'izany ny hozatry ny valahana.
Rehefa malemy ny gorodona pelvika, zavatra mitranga amin'ny antony maro samihafa dia mihazakazaka izy ny loza ateraky ny fijaliana, ankoatry ny hafa, ny famoahana ny urine, ny tsy fetezana eo amin'ny lahy sy ny vavy, ny firoboroboana na fanaintainana ambany. Zava-dehibe tokoa ny fikarakarana, fiarovana ary fanamafisana ny valanoranony mba tsy hitrangan'izany.
1 Ahoana no ahafantarako raha manana rihana pelvika malemy aho?
1.1 Ahoana ny fanamafisana ny gorodona
Ahoana no ahafantarako raha manana rihana pelvika malemy aho?
Raha manana malemy hozatra sy hozatra ianao dia afaka mijaly noho ny soritr'aretina isan-karazany toy ny tsy fihinanan'ny urinary. Zavatra tena mampiavaka sy mora tsikaritra dia izany tsy azonao fehezina ny famoahana ny urineNa dia mikohaka, mitsambikina na mihomehy aza ianao dia mety manana fivoahana kely, izay marika mazava amin'ny gorodona pelvika malemy.
Ny fambara hafa ahafahanao mamantatra ireo olan'ny gorodona dia fanaintainana rehefa manao firaisana, ny fanaintainan'ny lamosina ary mihombo mihitsy aza, izay ny fifindran'ny taova tohanan'ny hozatra, toy ny vozony. Ireo soritr'aretina ireo no tena matotra indrindra, noho izany dia tsy tokony avelanao handalo ny fotoana ary na kely aza ny soritr'aretina, manatona ny dokotera mba hanombanana ny toetran'ny gorodonao.
Ahoana ny fanamafisana ny gorodona
Mba hanamafisana ny gorodona pelvika dia azo ampiasaina karazana fitsaboana isan-karazany. Ny safidy voalohany raha mijaly amin'ny olana lehibe ianao dia ny fitsaboana ara-pahasalamana manokana amin'ity raharaha ity. Raha tsy izany dia mety hiharan'ny fahasimbana bebe kokoa ianao amin'ny fanandramana mamaha ny olanao. Amin'ny tranga malefaka indrindra ary toy ny fepetra fisorohana koa, misy ny solony toa ireto manaraka ireto.
Fanatanjahan-tena Kegel: Ireto karazana fampihetseham-batana ireto dia natao hiasa ny hozatry ny valahana, ka hamafisina toy ny fiasa hozatra hafa ao amin'ny vatana. Ho an'ny fampiharana Kegel fitaovana toy ny baolina sinoa na ny mpanao fanatanjahan-tena no azo ampiasaina Kegel. Amin'ireto fampiharana ireto dia azonao atao ny manalefaka ny hozatra sy manatsara ny fiasan'ny gorodona.
The Yoga: Ny pose yoga sasany na asanas dia mety amin'ny fiasan'ny gorodona. Mifampidinika amin'ny manam-pahaizana manokana hahitanao fanazaran-tena tsara indrindra amin'ny tranga manokana anao. Hatramin'ny niasan'ny gorodona raha tsy simba dia mety tsy hamokatra.
Fanatanjahan-tena misy fiatraikany ambany: izay rehetra tsy milaza fiatraikany amin'ny vatana, izay tsy misy fitsambikinana, na fihetsika tampoka. Ny fanatanjahan-tena tsara indrindra ho an'ny vehivavy amin'ity tranga ity dia milomano, bisikileta, mandeha an-tongotra, na mitaingina elliptical.
Tena ilaina koa ny mandinika ny fepetra fisorohana sasany. Ahoana ny fihazonana lanjan'ny vatana tsara, fampiharana ara-batana tsy tapaka, manana fahazarana tsara amin'ny fidiovana, mihinana sakafo manan-tavy raha te hanana fitetezana tsinay marina, manana fihetsika tsara indrindra rehefa mipetraka sy manao hetsika misy fiatraikany ambany.
Misy ny antony mampidi-doza mety hampihena ny gorodona, toy ny fiterahana voajanahary, ny fitondrana vohoka, ny hatavezina, ny fanatanjahan-tena misy fiatraikany be loatra, ny fitohanana maharitra, ny aretin'ny taovam-pisefoana na ny fandidiana na ny fitsaboana ara-behivavy. Ny fisorohana no fitaovana tsara indrindra hiadiana amin'ny olana mety hiteraka korontana isan'andro. Mifandraisa amin'ny dokotera ary tadiavo ny fomba tsara indrindra hanefana an'io olana io alohan'ny hahatongavany ho matotra kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Torohevitra momba ny fahasalamana » Inona ny gorodona pelvika sy ny fomba fanamafisana azy
Ahoana ny fomba fanaovana takelaka lamba ho an'ny fandriana
Ny fanirery dia niaraka tamin'izy mivady